सडक सम्पत्ति, सडक दुर्घटना र यसको प्रयोग गर्ने तरिका— १
सडक भन्नाले सवारी साधनहरूको आवागमनका लागि प्रयोग हुने मार्गलाई बुझाउँछ । सडक यातायात नेपालीलाई विकल्पहीन विकल्प हो । जलमार्गको सम्भावना नभएको, रेलमार्गको विस्तार भइ नसकेको र हवाईमार्ग अधिकांश नेपालीको पहुँचबाहिर रहेकाले सडक यातायात एकमात्र भरपर्दो यात्राको माध्यम हो ।
कर निर्धारणका आधार र जटिलता
विश्वमा सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर दर भएको मुलुक चाद हो । त्यहाँ व्यक्तिगत आयकरको दर ६० प्रतिशत छ । तर, त्यहाँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कुल कर राजस्वको अनुपात ४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । करको दर बढी हुँदैमा सरकारको आम्दानी बढी हुँदैन भन्ने यो उदाहरण हो । जनताको आम्दानी नै न्यून भएपछि दर बढी भएर कर राजस्व बढ्दैन । विकसित देशहरूमा हेर्दा सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकरको दर भएको मुलुक स्वीडेनमा ५७ प्रतिशत रहेको छ । त्यहाँ जीडीपीको तुलनामा ५० प्रतिशत कर राजस्व उठ्ने गरेको छ ।
अल्लोको अनेक उत्पादन र बजारीकरण
आजभोलि विश्वभरि नै गो ग्रिन, गो नेचर, लिभ नेचुरल्ली आदिको नारासहित प्राकृतिक खानपिन, प्राकृतिक पहिरन, प्राकृतिक रहनसहन, प्राकृतिक बसोबास आदिले व्यवहारले सार्थकता पाउँदैछ । त्यसैले त आजका आधुनिक भनिएका मान्छेहरू पनि पुरानो भनिएको वा कुनै बेला ‘गरिबको खाना, गरिबको नाना’ मानिएको खानपिन र वेशभूषामा फर्केका छन् । त्यसैले उनीहरूले आफ्ना पितापूर्खाले विगतमा खाँदै आएको लाउँदै आएको ‘खाना र नाना’ अर्थात् प्राकृतिक खाना, प्राकृतिक पहिरन, प्राकृतिक रहनसहन, प्राकृतिक बसोबास अँगाल्न थालेका छन् । यहाँ त्यस्तै प्राकृतिक चिजबिजहरूमध्ये पहिरनमा पर्ने अल्लोको उत्पादनसँग रहेर केही लेख्ने प्रयास गरिएको छ ।
पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास हुँदै गण्डकी प्रदेश
पूर्वमा वागमती प्रदेश, पश्चिममा ५ नम्बर प्रदेश, उत्तरमा तिब्बत, दक्षिणमा ५ नम्बर प्रदेश र भारतको विहार रहेको तथा प्रशासनिक हिसाबले गण्डकी प्रदेशलाई साविक धवलागिरि अञ्चलका ४ जिल्ला, गण्डकी अञ्चलका ६ जिल्ला र लुम्बिनी अञ्चलको नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट सुस्तापूर्वको भूभाग गरी ११ जिल्ला, १ महानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका गरी ८५ स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ । यस प्रदेशको क्षेत्रफल २१ हजार ५ सय ४ वर्गकिलोमिटर छ र मानव विकास सूचकांक सबै प्रदेशको भन्दा उच्च ०.५६७ रहेको छ । यो प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार २ सय ७७ अमेरिकी डलर र साक्षरता ७४.८१ प्रतिशत छ भने २९ वटा जलविद्युत् आयोजना रहेका छन्, साथै २८.३ हजार मानिसले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । यस प्रदेशमा १४.९१ प्रतिशत जनता आर्थिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।
कर–ऋण, कोबिड–१९ र भ्रमण वर्ष
अन्ततोगत्वा सरकारले नेपाल भ्रमण वर्षलाई हालका लागि स्थगन गर्ने भएको छ । सम्भवतः नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सचिवालय र भ्रमण वर्ष कार्य समितिको विघटन पनि औपचारिक रूपमै नेपाल सरकारले केही दिनभित्रै गर्ला । आन्तरिक पर्यटकीय गतिविधिहरू त यथावत् नै चलिरहलान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, त्यो पनि कोबिड–१९ को वर्तमन त्रासदीले गर्दा जन स्वास्थ्यका लागि घुमघाम जोखिमपूर्ण नरहला कसरी भन्नु । प्रधानमन्त्रीले पनि यसतर्फ संकेत गर्दै सम्बन्धित स्वास्थ्य निकायहरूलाई चनाखो हुन आग्रह गरिसक्नुभएको अवस्थाले जनमानसमा संचेतना जागृत हुँदै आइरहेको आभास हामी सबैले पाइसकेका छौँ ।
महामारीबाट उठ्ने चिनियाँ विश्वास
चीन र विश्व एकअपासमा सम्बन्धित रहेका छन् । त्यसैले चीनले विश्वव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि आफ्नो जिम्मेवारीका साथ काम गरिरहेको छ । अर्थतन्त्र गतिशील र वितरण प्रणाली हो । यो दीर्घकालीन रोकावटबाट पनि उठ्न सक्छ । चिनियाँहरू दिन–रात महामारीका कारण गुमाउने अवस्थालाई कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
विवादमा विद्युतीय बस व्यवस्थापन
नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनका रूपमा ट्रली बस वि.सं. २०३२ देखि २०५८ सम्म त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंदेखि सूर्यविनायक, भक्तपुरसम्म चलेको थियो । राणाकालमै हेटौंडा–काठमाडांै विद्युतीय रोपवे चलेको थियो । माल पाएर चाल नपाएको कारणले ती सबै इतिहास बने । पछिल्लो समयमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । भर्खरै निजी लगानीको सुन्दर यातायातले काठमाडौं उपत्यकमा बिजुली बस सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
कफिन, रेमिट्यान्स र नेपाली अर्थतन्त्र
हाल राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा दैनिकजसो ‘सुटकेस बोक्ने ट्रलीमा कफिन’, ‘बन्द बाकसमा फिर्ता’ जस्ता समाचार प्रकाशित भइरहेका पाइन्छ । केही वर्ष अघिसम्म ‘कफिन’ शब्दको अर्थसँग धेरै नेपाली अनभिज्ञ थिए । यद्यपि रेमिट्यान्सका विषयमा सबैजसो नेपालीलाई थाहा छ । अझै प्रत्येक दिन झन्डै १ हजारको हाराहारीमा युवाहरू कामको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन्, तर थोरैलाई थाहा छ, तिनै युवाहरू बन्द बाकसमा शवका रूपमा (कफिन) प्रत्येक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा औसतमा सरदर ३ जना भित्रिन्छन् । विमानस्थलमा कफिन ओसार्न सजिलो हुने ट्रलीको व्यवस्था छैन । सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको एकोहोरो नाराको रटान दिइरहन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुटकेस ओसार्ने ट्रलीमा कफिन ल्याउनुपरेको छ । यो ज्यादै लज्जा र संवेदनहीनताको कुरा हो ।
गत पुसको १३ र २२ गतेको कारोबार अनलाइनमा ‘नेपाली संस्थामा विदेशी संरक्षक र क्रिस्चियनलाई जागिर खाना प्रक्रिया नचाइने भन्ने’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारप्रति कारितास नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उपयुक्त मितिमा प्रकाशित समाचारहरूले सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य भएको हुँदा यस्तो भ्रममा नपर्नुहुन समाचारको खण्डन पठाएका छौं ।
धार्मिक पर्यटनबाट समृद्धि सम्भव
नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्षका रूपमा घोषणा गरिसकेको छ । भ्रमण वर्षको सुरुवातकै दिनमा १ सय ८ शंख फुकेर शुभारम्भ गरिएको थियो । यसले नेपाल र नेपाल धर्मप्रति कति आस्था राख्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छन् । त्यसो त धर्मबाट टाढा रहने कमै मान्छे होलान् । कुनै न कुनै माध्यमबाट मानिस धर्मसँग जोडिएकै हुन्छन् । तर, नेपालले सुरु गरेको भ्रमण वर्षमा धार्मिक पर्यटनका लागि पनि सरकारले ठोस योजना अघि बढेका भए पर्यटक भिœयाउने लक्षित संख्या भेट्टाउन सहज हुन थियो ।
सेयर बजारमा सेयर किनबेच कसरी गर्ने ?
धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा नियमित र चाहेजति सेयर वा डिबेन्चर किन्न पाइन्न । अनि हामीले किनेको सेयर कम्पनीले फिर्ता पनि किन्दैन । सेयरमा लगानी गर्न वा लगानी बढाउन अनि प्राथमिक बजारमा किनेकै सेयर बेच्न पनि बजारमै जानुपर्छ । अझ स्थानीय, आयोजना प्रभावित, जनताको लगानी, समृद्धिको आधार आदि नाममा भिडाइएका सेयरहरूका कारण धेरै सर्वसाधारण नचाहिकनै सेयर बजार धाउन बाध्य छन् । सूचीकृत धितोपत्र (सेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड) को कारोबार हुने बजारलाई नै दोस्रो बजार वा सेयर बजार वा पुँजीबजार भनिन्छ । यसको सञ्चालन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले र नियमन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) ले गर्छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनको समस्या
नेपाल एउटा विकासोन्मुख देश भएर होला, सायद यस देशमा रोजगारीका माध्यमहरू न्यून रहेका छन् । भएका रोजगारी पनि मानिसको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नपुग्ने अवस्था रहेको बताए— एक पाकेटमार बाबुले । र, म आफैं छक्क परे । उनी त बाध्यताले पो पाकेटमार बनेका रहेछन् । तर, यस्तो खालको काम एकदमै गैरकानुनी हो । यसका हामी सबैले खुलेर विरोध गर्नुपर्छ ।
उपभोक्ता शिक्षा र अधिकार
हरेक व्यक्तिले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्ने व्यक्तिलाई उपभोक्ता भनिन्छ । तर, वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्ने मात्र नभई अन्य वस्तु तथा सेवाका उत्पादन आपूर्तिकर्ता तथा विक्रेतासमेत उपभोक्ता हुन सक्छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ को धारा ४४ मा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले उपभोक्तालाई बजारमा प्राप्त हुने वस्तु तथा सेवा तथा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा समूह भनेर परिभाषित गरेको छ । त्यसैगरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन दफा २ ‘क’ ले कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था उपभोक्ता हो भनेर परिभाषित गरिएको पाइन्छ ।
पर्यटन, जलस्रोत, कृषि : राष्ट्रका आधार क्षेत्रहरू
विभिन्न स्वदेशी सञ्चारमाध्यमहरूले सम्प्रेषण गर्ने गरेका विविध समाचार सुन्दा र पढ्दा लाग्छ, हाल नेपालले प्रगतिपथमा अलिक जटिल समयबाट गुज्रिनुपरिरहेको छ । पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का लिएका ठेकेदारहरू कछुवाको गतिमा छन् । यहाँसम्म कि कतिपयले आफ्नो ठेक्का नै बिर्सेजस्तो छ । भौतिक संरचनाहरूको निर्माण र पुनर्निर्माणको अवस्था पनि दयनीय रहेकाले जनमानसमा निराशा छाएको देखिन्छ । सरकार घरी–घरी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको पुनरावृत्ति गर्दै सुतेको बाघ जुरुक्क उठेर हुंकारिरहेको भान हुन्छ । यसो भइरहेको पनि दुई वर्ष व्यतीत भैसक्यो ।
चिसो र पानी पर्ने मौसममा हेरचाह
फागुन महिनामा आइरहेको मौसमी परिवर्तनले धेरै मानिसलाई बिरामी बनाइरहेको छ । बेला–बेलामा पानी पर्ने, हावा–हुरी चल्ने र चिसो बढ्ने क्रम पनि जारी नै छ ।बिहान–बिहानै चाँडै उठेर बाहिरी कसरत गर्न वा मर्निङ वाक गर्नका लागि अहिले सहज वातावरण छैन । अहिलेको मौसमी परिवर्तनले आफ्नो व्यायाममा चाप दिन पनि सकिँदैन । यदि यी कुराहरू अपनाउनुहुन्छ भने पक्कै पनि मौसमी परिवर्तनको शारीरिक कठिनाई हटाउन सकिन्छ :